Obuzivuselelayo Gate Valve
Non Rising Isiqu Gate Valve
Thulile Hlola Valve
Y Uhlobo strainer
Valve (Tianjin) Co., Ltd kuveza e Tianjin - emnothweni ashukumisayo kakhulu enyakatho umphini China.Like kuyinto ephezulu imikhiqizo valve Manufacturing Inkampani esesikhundleni ucwaningo kweluhlaka, ukukhiqiza, izinsiza ukumaketha kwelinye.
Nge eziphambili ubunjiniyela design izindlela, evuthiwe imishini yokukhiqiza, ukuhlola izindawo yokuqinisekisa kanye nomqondo ukukhiqizwa mafutha, thina "Thanda Valve" ukuqinisekisa ukuthi ingxenye ngayinye kuwo wonke umkhiqizo thina ukunikezela ungaphakathi high performance.The ikhwalithi livela ukuphathwa yonke imininingwane. Kusukela kusungulwa yayo, inkampani uye bamukela umklamo abasizwa-computer, njengemishini CAD futhi Solidworks, futhi owokuqala ukwethula okuphathwa Six Sigma.
Umi iqoqo esiqinile indlela yokuphathwa kwamazinga, ziyaqhubeka ziphishekela zero imikhiqizo isici. We ngokukhethekile butterfly valve, isango valve, imbulunga valve, hlola valve, ibhola valve, umfutholuketshezi ukulawula valve, Balance valve kanye neminye imikhiqizo chungechunge. Kubuye kwenze sibe isakhiwo valve e ngezinto ezahlukene, ingcindezi, usayizi kanye neminye imikhiqizo, kunezinhlobo ezingaphezu kuka-50 ochungechungeni, ngaphezu 1,200 izinhlobo.
NJENGO Valve kuyoba ukuba unqambothi emisha engokwesayensi neyezobuchwepheshe, inkonzo unqambothi, toop izinga umoya ebhizinisi ukubamba iqhaza ukudalwa esizayo. Nge ikhwalithi yemikhicito nokwaneliseka ikhasimende ukuba balolonge ibhizinisi lethu inkampani yethu, Nge ukuphishekela wenkuthalo nokuthuthukiswa okuqhubekayo ngaphezu thina. "NJENGO iphupho" uzokwenza "iphupho Chinese" okuningi okuthakazelisayo!